Umkhiqizi nomhlinzeki waseChina SD7HW Shehwa
I-SD7HW ngogandaganda yi-dozer yohlobo lwethrekhi engu-230 ene-sprocket ephakeme, idrayivu yokuhamba ngamandla, izilawuli ezimiswe okwesikhashana kanye nezilawuli zokubacindezela. Amandla wehhashi we-SD7HW-230, i-sprocket bulldozer ephakeme ihlanganiswe ne-modular design kulula ukuyilungisa nokuyigcina, Ikhulula uwoyela ngokucindezela komehluko ...
I-SD7HW ngogandaganda yi-dozer yohlobo lwethrekhi engu-230 ene-sprocket ephakeme, idrayivu yokuhamba ngamandla, izilawuli ezimiswe okwesikhashana kanye nezilawuli zokubacindezela.
Amandla wehhashi we-SD7HW-230, i-sprocket bulldozer ephakeme ihlanganiswe ne-modular design kulula ukuyilungisa nokuyigcina, Ikhulula uwoyela ngokucindezela komehluko, uhlelo lwe-hydraulic lenza ukuvikela imvelo futhi longe amandla ngokusebenza kahle okuphezulu. Ukuphepha isimo sokusebenza ngokunethezeka, ukuqapha kagesi kanye ne-ROPS cabin enekhwalithi ethembekile ephelele, insizakalo enhle kakhulu ukukhetha kwakho okuhlakaniphile.
I-SD7HW enomfutho ophansi womhlabathi umshini ofanele osetshenziselwa ukuphatha udoti.
Isisindo sokusebenza (kufaka phakathi i-ripper) (Kg): 25670
Ukucindezela komhlaba (kufaka phakathi i-ripper) (KPa): 51.96
Ubuncane. imvume yomhlaba (mm): 484
Amandla we-Dozing (m): 13.4
Ubukhulu bebonke (mm): 524543823482
Uhlobo: CUMMINS NTA855-C280S10
Amandla we-Flywheel (KW / HP): 169/230
UMax. i-torque (Nm / rpm): 1097/1500
Kukalwe ukusetshenziswa kukaphethiloli (g / KWh): 235
Ububanzi besicathulo (mm): 760
Emuva (Km / h) 0-4.8 0-8.2 0-13.2
UMax. ingcindezi yesistimu (MPa): 18.4
Isiguquli seTorque: Isiguquli seTorque amandla ahlukanisa uhlobo lwe-hydraulic-mechanic type
I-steering clutch: I-steering clutch icindezelwe i-hydraulic, imvamisa iklatshi elihlukaniswe.
I-Braking clutch: I-braking clutch icindezelwe entwasahlobo, i-hydraulic ehlukanisiwe, uhlobo lwe-meshed.
Idrayivu yokugcina: Idrayivu yokugcina inezinyathelo ezimbili zokunciphisa amaplanethi, indlela yokugcoba.
Langaphambilini I-TYS230-3 Bulldozer
Olandelayo: I-TS160-3 Bulldozer